Lozam-pifamoivoizana teny amin’ny RN2
Nosokirina tao anaty fiara ilay mpamily
Nifampisintonan’ny fokonolona tao anaty fiara ny mpamilin’ny kamiao iray niharan-doza tamin’iny lalam-pirenena faharoa iny, ny alin’ny sabotsy 15 martsa 2014 teo. Tery tao anatin’ilay fiara ary tapa-balahana ihany koa ka tsy afaka nitsangana intsony raha tsy tonga teny an-toerana ny fokonolona.
Ny sasakalin’ny sabotsy faha 15 martsa 2014 teo no fantatra niharan-doza tao anatin’ny Kaominina Ambohimangakely mamakivaky iny lalam-pirenena faharoa iny ity fiara ity.
Araka ny loharanom-baovao voaray dia avy naka vary milanja 10 taonina tany Ambatondrazaka ity kamiao ity izao niharan-doza izao. Rehefa tafiditra tao anaty fiolahanana ity farany no voalaza fa nifanehatra tamina fiara vaventy iray hafa nifanena taminy. Samy tsy nisy nahita na ny mpamilin’ny an-daniny na ny an-kilany ka izay ny fototra nahatonga ny loza.
Nifandona ny roa tonta, ary tapaka mihitsy ny tsindry hisatr’ilay kamiao nitondra vary noho ny fifandonana. Vokany, tsy nety tafajanona intsony ilay fiara ary avy hatrany dia namantana tany anaty lavaka. Potika tanteraka ny lohany ary tafahitsoka teo amin’ny familiana ilay mpamily, fa ilay tovolahy nanampy azy kosa no naratra mafy.
Ny Alahady 16 martsa, maraina, vao nifanaretsaka nisikotra an’ity mpamily tao anatin’ilay fiara ny fokonolona teny an-toerana. Fantatra fa efa tsy misy ahiana ny fahasalaman’ity farany amin’izao fotoana izao.
(27) Erino RAZAFIMANANA : 18-03-2014 - 18:00